सम्मान स्वरूप शेयर गरौ !!
Homeसम्मान स्वरूप शेयर गरौ !!
सेवा नै धर्म हो: यी हुन् पाँच रुपैयाँमै उपचार गर्ने ‘डाक्टर’, सम्मान स्वरूप शेयर गरौ
April 27, 2019 Spnews Comments Off on सेवा नै धर्म हो: यी हुन् पाँच रुपैयाँमै उपचार गर्ने ‘डाक्टर’, सम्मान स्वरूप शेयर गरौ
बिरामी पर्दा हाम्रो आँखा ठोकिन आइपुग्छ, अस्पलाको लामो लाइन र औषधिको महँगो बिल । तर, वाङ्चुक राप्तेन लामाले विगत तीन वर्षदेखि पाँच रुपैयाँमै बिरामको उपचार गरिरहेका छन् । उमेरले तीन दशक टेक्न लागेका उनी ‘ठ्रङ्गु […]
१४ वर्षे बालकले भेट्टाएको १ लाख यसरि फिर्ता गरे, सम्मान स्वरूप शेयर गरौ !!
April 13, 2019 Spnews Comments Off on १४ वर्षे बालकले भेट्टाएको १ लाख यसरि फिर्ता गरे, सम्मान स्वरूप शेयर गरौ !!
सर्लाहीका १४ वर्षका आर्यन श्रेष्ठले भेट्टाएको १ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेका छन्। लालबन्दी नगरपालिकास्थित नवलपुर चोकमा शुक्रवार दिउँसो भेट्टाएको पैसा श्रेष्ठले शनिबार फिर्ता गरेका हुन्। आफ्नो पसल नजिकमै रहेको मामाघर जाँदै गरेको अवस्थामा श्रेष्ठले रोडमा […]
कुलमानले गरे कमालः विद्युत प्राधिकरणको नाफा २ अर्ब ८४ करोड, सम्मान स्वरूप शेयर गरौ
April 12, 2019 Spnews Comments Off on कुलमानले गरे कमालः विद्युत प्राधिकरणको नाफा २ अर्ब ८४ करोड, सम्मान स्वरूप शेयर गरौ
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा खुद नाफा २ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाउन सफल भएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छपन्नौँ वार्षि प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणको जगेडा तथा संचित […]
दुवै हातका औंलाहरु होईन हत्केला नै नभएकी १६ वर्षीया सविता एसईई दिँदै, सम्मान स्वरूप शेयर गरौ
March 24, 2019 Spnews Comments Off on दुवै हातका औंलाहरु होईन हत्केला नै नभएकी १६ वर्षीया सविता एसईई दिँदै, सम्मान स्वरूप शेयर गरौ
यस वर्ष एसईई दिइरहेका देशभरका कूल ४ लाख ७५ हजार ३ परीक्षार्थीमध्येकी एक हुन् सविता थापा । तर, उनी अरुजस्तै सामान्य अवस्थाकी परीक्षार्थी भने होइनन् । १६ वर्षीया सविताका दुवै हात ‘अधुरा’ छन् । अरुको […]
ट्याक्सीमा छुटेको ३ लाख ५० हजार बराबरको धनमाल चालकले फिर्ता गरे, सम्मान स्वरूप शेयर गरौ !!
February 20, 2019 Spnews Comments Off on ट्याक्सीमा छुटेको ३ लाख ५० हजार बराबरको धनमाल चालकले फिर्ता गरे, सम्मान स्वरूप शेयर गरौ !!
बा २ ज २२७९ नम्बरको ट्याक्सीमा छुटेको काठमाडौं थापागाउँ बस्ने गुल्मी बाझकटेरी ३ घर भएकी २८ वर्षीया वसन्ता भुषालको करिब ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको धनमाल प्रहरीले सम्बन्धीत धनीलाई बुझाएको छ । बुधबार बिहान […]
वीर गोरखालीकाे छाेराे देवेन्द्र आले बने बेलायती सैनिकको उच्च अधिकृत, सम्मान स्वरूप शेयर गरौ !
February 4, 2019 Spnews Comments Off on वीर गोरखालीकाे छाेराे देवेन्द्र आले बने बेलायती सैनिकको उच्च अधिकृत, सम्मान स्वरूप शेयर गरौ !
नेपालका देवेन्द्र आले बेलायती सेनाको लेफ्टिनेन्ट कर्णेलमा बढुवा भएका छन् । स्याङजा स्थायी घर भएका उनी गत बिहीबार कर्णेल पदमा बढुवा भएका हुन् । आले करिब ३० वर्षेदेखि बेलायती सेनामा कार्यरत छन् । सो पदमा पुग्ने […]
January 28, 2019 Spnews Comments Off on यी हुन् बच्चा अपहरणकारी समात्‍ने बहादुर प्रहरी, सम्मान स्वरूप शेयर गरौ !
‘सामाखुसीबाट स्कुलको एउटा बच्चा अपहरण गरेर मोटरसाइकलमा लगेका छन्, तुरुन्त सवारी चेकिङ सुरु गर्नुपर्योा।’ आइतबार दिउँसो ३ बजेर १५ मिनेट जाँदा राजधानीका धेरै प्रहरीको वाकीटकीमा यस्तो सन्देश आयो।महानगरीय प्रहरी बिट हलचोक, स्वयम्भुका असई ऋषिराम चपाईं […]
हातखुट्टा गुमाँउदा पनि कृष्णलाई अपार माया गर्ने श्रीमतीको जताततै तारिफ, सम्मान स्वरूप शेयर गरौ !!
January 8, 2019 Spnews Comments Off on हातखुट्टा गुमाँउदा पनि कृष्णलाई अपार माया गर्ने श्रीमतीको जताततै तारिफ, सम्मान स्वरूप शेयर गरौ !!
सानैमा जीम्मेवारीको भारी बोकेका कृष्ण ओलीका सपना धेरै थिए । इलेक्ट्रिक सब इन्जिनियर पढेका रुकुम सिम्लिका कृष्ण ओली ठुलो सपना थियो आफ्नी जीवनसंगिनीलाई स्टाफ नर्स पढाउने । कसलाई थाहा हुन्छ र भोलि ? त्यस्तै बज्रपात […]
साहसी महिला ! जसले लुटेराको प्रतिकार गर्दै बन्दुक खोसिन्, सम्मान स्वरूप शेयर गरौ !!
January 4, 2019 Spnews Comments Off on साहसी महिला ! जसले लुटेराको प्रतिकार गर्दै बन्दुक खोसिन्, सम्मान स्वरूप शेयर गरौ !!
गएको मंगलबार साँझ करिव ६ बजे मंगला गाउँपालिका–५ अर्मनको किमचौरकी ६३ बर्षिया बृद्धा लीलमती बुढाथोकी घरमा एक्लै थिईन् । बेलुका अत्याधिक चिसोका कारण बुढाथोकी चुल्हो नजिक बसेकी थिईन् । बाहिर सुनसान थियो, बस्तीका सबै घरभित्र […]